Glucerna ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် သောက်သုံးရန်အကောင်းဆုံးအချိန် - Glucerna Myanmar
Glucerna ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် သောက်သုံးရန်အကောင်းဆုံးအချိန်
ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်မားခြင်း (hyperglycemia) သို့မဟုတ် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်းခြင်း (hypoglycemia) ဖြစ်သော်လည်း ကောင်းသောအစားအစာများကို စားသုံးနိုင်ပါသေးသည်။2,3အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အစားအစာများနှင့် မှန်ကန်သောဖြည့်စွက်စာများကို စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများသည် ၎င်းတို့၏သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်ကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် အသင့်တော်ဆုံးသော ဖြည့်စွက်စာများကို ရှာဖွေရန် အရေးကြီးပါသည်။ နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော်ကြာ အာဟာရသိပ္ပံဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများပြုလုပ်ထားသည့် Glucerna သည် ဆီးချိုသွေးချိုသမားများအတွက် ၎င်းတို့၏ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါပန်းတိုင်ကိုပြည့်မှီစေရန် မည်သို့ ထုတ်လုပ်ထားသည်ကို ယနေ့လေ့လာကြပါမည်။1
အဓိကအချက်မှာ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်သည်။
သွေးတွင်းအချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ၀ မှ ၁၀၀ ထိသတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းသည်သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်ခြင်းကိုဖော်ပြပြီး (နံပါတ်နိမ့်လေလေ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်နှုန်းနှေးလေလေဖြစ်သည်) သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကောင်းမွန်စွာထိန်းညှိမှု အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် အစားအစာရဲ့ အဆီပါဝင်မှု၊ ပြုပြင်ထားတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ အစာခြေနိုင်စွမ်းအပေါ် များစွာမူတည်ပါတယ်။ သင်စားတဲ့အစားအစာ က သင့်ရဲ့ သွေးတွင်းဂလူးကိုစ့် အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်နိုင်လဲဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အစာမစားမီမှာ တစ်ခါ၊ စားပြီးတစ်ခါ သွေးတွင်းဂလူးကိုစ့်ကိုတိုင်းကြည့်ခြင်းပါပဲ။ သိသိသာသာကွာခြားနေပါက ထိုအစားအစာ က သင့်အတွက်သတိထားရမဲ့အရာဖြစ်လာပါပြီ။7 အဓိကအချက်မှာ အစားအစာ၏ ကစီဓာတ်ပါဝင်မှုနှင့် ကစီဓာတ်အမျိုးအစားတွေက အရေးကြီးပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုသမားများသည် ခန္ဓာကိုယ်မှ ဖြည်းညင်းစွာထုတ်ပေးသော ကစီဓာတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို (ဖြည်းညင်းစွာထုတ်လွတ်မှု၊ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်းနည်းသော) ရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးပြီး ၎င်းသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ပိုမိုတည်ငြိမ်စေပါသည်။ ကစီဓာတ်ဖြည်းညင်းစွာ ထုတ်လွှတ်ပေးသောအစားအစာများမှာ အုတ်ဂျုံ၊ ဂျုံလုံး၊ ပဲ၊ သစ်တော်သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး နှင့် ကစီဓာတ်မပါသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်သည့် ပန်းပွင့်စိမ်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီနှင့် ကညွတ်တို့ဖြစ်သည်။ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်းနည်းသော အစားအစာများကို ရွေးချယ်ရန် နောက်ထပ်အကြံပြုချက်မှာ ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပရိုတင်းဓာတ်သည် ကြွက်သားကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေရုံသာမက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို မတက်စေဘဲ ဗိုက်ပြည့်နေပြီး ဆာလောင်မှုကို တားဆီးပေးပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအတွက် Glucerna ၏ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ
နှစ် (၃၀) ကျော်ကြာ သိပ္ပံနည်းကျ တွက်ချက်မှုများနှင့် လေ့လာမှုများနှင့်အတူ၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအတွက် Glucerna သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ထိန်းညှိမှုအတွက် အုတ်ဂျုံ၊ ဂျုံလုံး၊ နှင့် ဘရိုကိုလီကဲ့သို့သော ဖြည်းညင်းစွာ ထုတ်လွှတ်သော အဆင့်မြင့်ကစီဓာတ်စနစ်^ ဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။4 myo-inositol ၄ ဆ+ နှင့် အတူ အင်ဆူလင်အာရုံခံနိုင်ရည်တိုးရန် အတွက် အထိရောက်ဆုံး ကစီဓာတ် နှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် ၂၈ မျိုးပါဝင်သော Glucerna သည် ၃လ အတွင်း သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်ကို ထိန်းညှိနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။# မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ် (၂၈) မျိုးတွင် ဗီတာမင် B2,B12,B6 နှင့် ဗီတာမင် C တို့သည် တည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်ကိုပေးပြီး အလုံးစုံကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးကာ အိုမီဂါ 3,6,9 တို့သည် နှလုံးအတွက် ကောင်းမွန်စေပါသည်။1,4
Glucerna ကို အစားအစာများတွင် ထည့်သွင်းရန် အကောင်းဆုံးအချိန်များ
အလွယ်တကူပျော်ဝင်နိုင်သော အမှုန့်ပုံစံဖြင့် ရရှိနိုင်သော ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအတွက် Glucerna သည် နို့ သို့မဟုတ် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ လိုအပ်သည့် အစားအစာများတွင် ထည့်သွင်း၍ စွယ်စုံသုံးနိုင်သည်။ သင်ရဲ့ ဆီးချိုသွေးချိုကို ထိန်းညှိခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံမှန်ဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်စာအစားအစာ အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး နေ့လည့်ပိုင်းအဆာပြေအဖြစ်၊ နံနက်စာတွင် သောက်စရာတစ်ခုအဖြစ် သို့မဟုတ် တစ်ပတ်တာလုံးတွင် အစားအစာအစားထိုးအဖြစ်( တစ်နေ့လျှင် ၁ ကြိမ် မှ ၃ကြိမ် ၊ ၅ ဇွန်းကို ရေ ၂၀၀ မီလီလီတာ)နှင့် ဖျော်စပ်စားသုံးပါ။1,4 ကောင်းမွန်သောအာဟာရအတွက် ထုတ်လုပ်ထားပြီး လက်တွေ့လေ့လာမှုပေါင်း ၅၀ ကျော်ဖြင့် သက်သေပြခဲ့သော Glucerna သည် အသုံးဝင်သော ဖြည့်စွက်စာဖြစ်သည်။10 ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပြီး နောက်ထပ်အချက်အလက်များနှင့် နမူနာများတောင်းခံရန်အတွက် Glucerna Myanmar သို့သွားရောက်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဆရာဝန်များမှ ထောက်ခံအကြံပြုထားသည့် နံပါတ် ၁ ဆီးချိုသွေးချိုဆိုင်ရာ အာဟာရဖော်မြူလာ~ ကို သင်၏ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းညှိရန်အတွက် Day 1 မှ စတင်လိုက်ပါ။*
#Sun et al. Asia Pac J Clin Nutr. 2008.
^Jenkins et al. Diabetologia. 1982.
*Glucerna has been shown to lower postprandial rises in blood glucose (Davila et al., 2019; Devitt et al., 2012; Luo et at., 2012; Mottalib et al., 2016)
+Compared to previous formula of Glucerna
~IQVIA, using the ProVoice Survey, fielded to 14,550 physicians from September 1, 2020 to August 31, 2021
Daw Myint Myint Win